40 zvigadzirwa zvinoshanda kwazvo, vane matani mashanu-nyota ongororo | Med Site
Kazhinji yenguva, iwe unotenga chigadzirwa online uye hautarisire yakawanda kubva icho, kunze kwekuzadzisa icho chakarongwa basa. Asi pese pakamboita chinguva, chimwe chinhu chinoratidzika pamusuwo wako unopfuura nepamusoro, sezvakangoitikawo kune izvi makumi mana zvakapepetwa zvigadzirwa zvinogadziriswa zvinotarisirwa.
Mikana iripo, iwe waona mashoma ezvigadzirwa izvi zvichiratidza pane mamwe akanakisa-ezvinyorwa pamhepo, uye ndizvo nekuti ivo vanokodzera nzvimbo yavo pavari. Nyaya yenyaya: iyi inokwenenzverwa mutauri weBluef iyo yakashongedzwa kusvika zviuru makumi maviri nezvishanu zveashanu nyeredzi dzekuAmerican kuongorora. Haisi iyo chete inopa inonakidza, yakazara-muviri stereo kurira, asi inopawo zvakare zvakareba maawa gumi nemaviri enguva yekutamba. Uye sezvo ichidzivirirwa nemvura, sarudzo yakanaka kana uchiswera zuva padziva kana kuturikwa nedziva. Iwe uchazowana zvimwe zvinyowani apa futi, zvakadaro, senge topical magnesium mafuta ayo anobatsira kuzorodza mhasuru mushure mekugwinya kwawedzeredza (kana maawa mashoma apedzerwa pachiitiko chekufona chebasa) kana seti yemapulagi plugs anokuita kuti utonge midziyo kubva kuapp. pafoni yako.
Kana usati wanga uchishamiswa nemufaro nechigadzirwa chiri kuita munguva, uri kurapwa. Zvese zvinhu izvi zvinoongororwa-zvinotenderwa uye zviripo nemazuva maviri-free shipping paAmazon.
Isu tinongokurudzira zvigadzirwa zvatinoda uye izvo zvatinofunga kuti uchaitawo. Isu tinogona kugamuchira chikamu chekutengesa kubva kune zvigadzirwa zvakatengwa kubva kuchinyorwa ichi, icho chakanyorwa neboka redu reCommerce.
Kuenda kwemazuva mashoma? Iyi yekuchengetedza kamera kamera inoshamwaridzana neapp, saka unogona kuwana mupenyu mapairesi yakanangwa zvakananga pafoni yako. Kunyangwe zvirinani, iwe unogona kushandisa iyo app kuisa panera uye uwane kutaridzika kwekamuri rese. Chikamu gumi nemaviri chekodhi chakanyorwa pese panofamba nguva padzinenge dzaonekwa, zvobva zvachengetwa pamusoro pegore, kuti iwe ugokwanisa kuzozviongorora gare gare.
Cheka tambo uye utore TV yako uchishandisa iyo Amazon Fire Stick, kuti iwe ugone kutungamira zviuru zvemabhaisikopo uye TV episodhi nekungodzvanya kweayela. Iyo inoenderana neese makuru makuru ekutsikisa masevhisi uye kukwanisa kuratidza uye mafirimu paAmerican Prime zvachose emahara. Uyezve, nekushanda kweAlpha, unogona kushandisa mirairo yezwi kuti uwane chaizvo zvauri kutsvaga.
Yakanakira kuvhara shiri, kuvhima, uye kukwira ndege, aya maboniboni anopa simba 12x yekukudza uye akashongedzwa neakadzika-mashoma mashandiro, saka unogona kuramba uchishandisa iwo kana zuva ratanga kuvira. Anogadzirisa makapu eziso anogaramo chero munhu akapfeka magirazi, uye maboniboni anoputira zvidiki, kuti iwe ugone kuvabaya mune yako pack.
Zvishoma zvinhu zvinoita mutsauko wakakura, kunge idzi tambo dzembambo dzinodzivirira tambo dzako kubva mukukotama ipapo chaipo yavanokombama zvakanyanya. Makara anochinja anotsvedza nyore nyore uye akakodzera tambo zhinji, kusanganisira USB, micro-USB, uye tambo dzemheni. Seti yega yega inouya nemasere akawanda-akawanda makola
Kana iwe uri kubata nezve calluses, kuoma, kana kutyorwa zvitsitsinho, iyi inorema-basa tsoka kirimu ndizvo zvaunoda kuti vadzose chimiro. Yakagadzirirwa nedhidhi yakakura ye allantoin - yakasarudzika moisturizer inopinda yakaomeswa maganda eganda kuendesa yakadzika hydration. Isa izvi pamubhedha uye tsoka dzako dzinozotanga kushanduka mukati memazuva mashoma.
Kudyara kukuru muhutano hwako, iyi probiotic inosanganisira gumi nembiri uye yekusunungura fomula iyo zvishoma nezvishoma inozoregedza chiyero kune hutumbu hwako, ichishanda kutsigira hutano husina hutano uye hwekudya system, ukuwo ichiwedzera hutano hwepfungwa uye hwepfungwa (ehe, hutumbu hwako ndehwako. wechipiri "uropi"). Iyo vegan, kosher, isina-GMO, uye isina mishonga yakajairika segorosi, gluten, uye nzungu.
Nekuda kweiyi dhayeti yekuchenesa, hapasisina kumira pakukwasira uchishamisika kuti ingani yefomura iwe yaunogona kudurura yakanyura mune kunyura. Inouya nyore pre-kuyerwa mune maviri dosi uye yakasimba zvakakwana kuti bust kuburikidza bvudzi, sipo, pepa, uye mafuta gregs. Rishandise muhari kana yekugezera uye yekicheni inonyura.
Ganda kushandisirwa magnesium ndiyo imwe yedzakanakisa nzira yekukohwa mabhenefiti eichi chishamiso mineral inozivikanwa kuporesa maronda emaronda, kuderedza kupwanya, kudzivirira migraines, kuderedza kunzwa kwekutya, uye kukurudzira kurara kwakakodzera. Iyi mafuta e-magnesium inobikwa kubva kuGungwa Rakafa, uye vanodzokorora veAmazon vanopika nezvakabuda, paine imwe kunyora kuti "inoshanda zvinoshamisa nekuda kwemaronda emutsipa uye nerve."
Anodiwa eA-varatidziri vanogara vachifamba iyo tsvuku kapeti, iyi Mario Badescu yekuomesa lotion inzira isina musoro yekubvisa zvikanganiso kamwe pavanoputika. Iyi tsika yekufarira tsika inogadzirwa nemusanganiswa weoini-inoderedza zinc uye salicylic acid, pamwe ne calamine yekunyaradza redness uye kuzvimba. Pfeka pamberi pemubhedha, uye unomuke kune imwe nzvimbo yakajeka.
Chengetedza zvasara zvako zvichitsva sehusiku hwawakatanga kuvabika nemabhonzo ekuchengetedza chikafu iwo anotambanudza kuti akwane pamusoro pe ndiro nemidziyo. Yakagadzirirwa kubva BPA-isina-silicone, ivo inopisa-kupisa uye yekushambidzira-yakachengeteka, uye paki imwe neimwe inouya nemanheru manomwe pakakora masiyero akasiyana.
Kana usati wamboedza gumbeti rine uremu pamberi, iwe uchazoda kuenda kumberi uye nekudzvanya "Wedzera kuCart". Kurema kunobatsira kukurudzira dopamine uye serotonin kugadzirwa, iyo inogona kubatsira kudzikisa kusagadzikana, kukurudzira kurara, uye kuita kuti iwe ubve mukudonha nekukurumidza. Inowanikwa mune akasiyana masimbi - sarudza imwe inenge gumi nembiri muzana yehuremu hwako.
Iri mbiri tsoka kutsvaira bar inoratidzika pumice kune rimwe divi kuti exfoliate uye akatsvedza kure akaoma ganda uye callus, uye kune rimwe divi sipo emollient sosi yakagadzirwa ine zvakanyorova moisturizing aloe, shea bhotela, uye vhitamini E. Shandisa izvi nguva dzose tsoka kutaridzika. uye unzwe kusununguka - kwete kuoma.
Neaya mushwa-wakavezwa dhayeti dhayeti, unogona kuve nechokwadi chekuti hapana bvudzi richadzika pasi dhayeti uye rinokonzeresa machira. Yakagadzirwa kuti ikwane ese akajairwa matinji emvura, inobata vhudzi tambo uye ndokuiputira ichitenderedza svikiro, nepo mafeturo mukati meanobvumira mvura kuyerera yakasununguka kuburikidza, kuti iwe unenge usinga mire inch yacho paunenge uri shampoo.
A fan favour ane zviuru zve mashanu-nyeredzi ongororo yeAmazon, ino inotakurika Bluetooth speaker inobatanidza zvisina waya kune chero chishandiso uye inopa yakasimba studio quality stereo kurira kwemaawa gumi nemaviri pakongoda imwe chete. Iyo IPX7 isina mvura, saka unogona kunakidzwa nemumhanzi wako uchitenderedza padziva kana pamhenderekedzo, uye ruzha rwakavakwa-mukubvisa pane mic zvinoreva kuti rwakakura kune mafoni zvakare. Sarudza kubva pamhando pfumbamwe.
Yakakura pakuita ndiro uye kuchenesa kumusoro inoparadzira Aya machira anogadzirisa anogadzirwa kubva kunotora zvakanyanya cellulose uye machira, uye imwe chete nhanhatu-pack inogona kutsiva kusvika pamakumi mapfumbamwe emakumi emapururu emapepa. Yakakwana kana iwe uchishandira nzira yako kuenda kune zero-tsvina imba, ivo vanoshambidzika-nemashini uye havazokwenecha kukwenya kumeso kwakasarudzika kana kusiira maricho kumashure.
Kana iwe ukabata nemusoro kana migraines, iwe unoziva kuti vangakanganisa sei, asi ichi acupressure chishandiso chinogona kupa imwe zororo repanyama. Nekugadzika zvakanaka kuisa clip pane iyo L14 acupressure point (pakati pegunwe rako uye forefinger), ichaendesa kurapwa kwekumanikidza kudzikamisa kurwadziwa ukuwo ichikwirisa simba uye kuderedza kushushikana.
Mhungu, nyoro, uye kunhuhwirira kunhuhwirira matambudziko akajairika mudzimba dzemazera ese, asi uyu munyoro unomedza unogadzirisa. Ingo pop kumusoro uye ichangoita kukwezva uye kutora yakanyanyisa kuderera, ichisiya chero kamuri richapora uye rakaomeswa. Mumwe muongorori weAmazon akanyora kuti, “Zvakanyanya kudzikisira kupera kwemukati mekugezera kwangu, uye kunogara kwenguva refu! Zvakanakisa kupfuura dzimwe mhinduro dzatakamboedza. "Bvisa munhuwi wetsiva uyo wanga uchititambudza kwemwedzi."
Iko kuri kuyedza kungokanda zvisinganzwisisike zvese nekuguma mumotikari yemotokari yako, kungoizarura iyo kana iwe uchinge uremerwa nezvitoro uye unouya takatarisana nemutoro wejangi. Uyu mudhongi akarongedza achaputira chiseko icho muhurongwa, nekuda kwemakomendi maviri makuru ezvinhu zvakakura uye mesh muhomwe padivi pemidziyo yezvishandiso uye zvinhu. Uyezve, chinhu icho chose chinokuputira kana yakwana nguva yekuisa mamwe masutukezi mukati.
Geza simbi yako yakakandwa yesimbi uye ma griddles zvakachengeteka neiyi cast iron yekupusha brashi. Mabhururu mapfupi akasimba zvakakwana kuti ape kutsvagorora kwakanaka, nepo chikamu chenguva chinokuita kuti usvike mumakona uye iyo inosuka inobata pazvinhu zvakabirirwa. Iyi inzira inoshanda yekuchenesa pasina sipo, saka pani yako inogona kuchengetedza iyo yakanyatso nyorera.
Yakasimba zvakakwana kuti ibate kusvika pamapaundi gumi nemashanu isina kumhara, idzi hovha dzekuchengetedza dzakanakira makiyi ekurembera, mifananidzo, tauro uye zvimwe. Ivo vanozokwira pane chero chinhu chakatsiga, kusanganisira mataira nemagirazi, uye sezvo zviri pachena, anenge asingaonekwe. Inotsigirwa nekunamatira, ivo vanoisawo zvakare nyore uye vari nyore kubvisa pasina kukuvadza chero nzvimbo.
Another (ahem) fan favourite, ino compact asi ine simba fan yakawana 17 zviuru zvishanu nyeredzi Amazon ongororo. Iyo inomhanya katatu-fan inotenderera yakawanda mweya yekupa zororo mukamuri chero inopisa, uye musoro unodzika madhigirii makumi mapfumbamwe, kuitira kuti iwe ugone kunongedza mhepo inoenda chero kwaunoda. Asi kusiyana nevamwe vateveri vane simba, iyi ine diki tsoka yakakwana yekugara padhesiki rako kana tafura yekofi.
Kana iwe uchinakidzwa nekuteerera mimhanzi, kufungisisa, kana podcasts iwe uchikwira kuenda kunorara, iyi yekurara kweBluetooth mask ndiyo chaizvo yaunoda. Iyo yekuyeuka foam masiki maficha akavakirwa-muBlu speaker, kuitira kuti iwe unogona kuteerera kune yako yekutamba iwe uchidzima kunze mwenje panguva imwe chete. Uyezve, kumberi kwemaski kune yakasanganiswa vhoriyamu uye kutamba / kumbomira kudzora kuitira nyore kushanda.
Nekuda kweiyi yekutsoka tsoka yekukochekera mat, iwe unogona kupa yakashanda tsoka tsoka kana uchi sutu. Iyo mat inoratidzira mazana emahara anoshanduka silicone mabhureki pamusoro, pamwe neasina kutsvedza kuyamwa makapu pazasi kuti ichengetedzwe zvakachengeteka kune yekugezera pasi.
Collagen inzvimbo yakakosha yekuivakira yemasisitimu mazhinji emuviri kusanganisira bvudzi, zvipikiri, ganda uye majoini, uye iyi collagen poda inzira iri nyore uye inoshanda yekuwana yakawanda yacho. Iine magiramu makumi maviri e Collagen pakushandira, haina flavor uye gluten-isina, uye inonyungudika kuita zvinwiwa zvinopisa kana zvinotonhora, zvakaita sekofi, mvura, smoothies, uye zvinwiwa zveprotein.
Isu tinovimba nemashini edu ekushambidza kuti mbatya dzedu dzive dzakachena, asi - zvakachena zvakadii machini? (Cue doomsday mumhanzi.) Mhanya mutoro neimwe yekuwachisa mapiritsi emuchina kamwe chete pamwedzi kuti uchenese zvasara uye gunk uye uve nechokwadi chekuti rako rakachena rekuwachira rakachena.
Kugara panze kuseri kwemba hazvireve kuti unopedza masikati ese uchitsikisa maburuguru - hang iyi misungo yekubhururuka kukwezva chero zvipukanana zvinogumbura, kuti iwe unakirwe nekunakirwa kwekunze. Kubvumidzwa kubata dzinosvika makumi maviri zviuru zvezviputi, zvese zvaunofanirwa kuita ndekuwedzera mvura kune bait mukati kuti unonoke nhunzi.
Kupararira nguva yakawanda kunze kunogona kureva kurumwa neumhutu uye masvosve ari kukanganisa mutambo wako wekukora, asi chipembenene ichi chinodzora chiputi chakagadzirirwa kuchengetedza zvipembenene kusvika mavhiki mana, kunyangwe kana kunaya. Ingobatirana nechero hose yegadhe kuti igovera zviri nyore muyadhi yako, uye ichaita umhutu, masvosve uye nhunzi.
Kana iwe uri mupfupi pane USB ports, unogona kushandisa iyi USB hub kukupa iwe yakawanda plug-in space. Inopindirana nemaWindows uye Mac anoshanda masisitimu, inoratidzira madhiri mana ayo anogona kushandurwa nekubvisika kuti anyatsoita basa rekuwedzera simba, uye iyo yakaonda, yakaenzana compact haizotora nzvimbo isina kukodzera padhesiki rako.
Yakagadzirwa ne100% silicone, idzi masaji ekudya anooma nekukurumidza kupfuura masiponji, izvo zvinoreva kuti havangabatise hutachiona kana hwema. Ivo vakanaka kubvisa kunyange akasindimara akabheka-pamasinaisi, uye ivo vanokanda vese vako cookware zvakachengeteka uye pasina kukuvara. Pakiti yega yega inouya nevatatu bhurukwa.
Kanda mabhora anoomeswa eaya nemutoro wako unotevera, uye iwo anobatsira kutenderedza mhepo kuitira kuti machira awedzere kukurumidza (anozowedzerawo kuchengetedza simba uye kuderedza yako bhiri remagetsi). Vanoshandawo kupfekesa zvipfeko nekudzivirira makenduru, zvinoreva kuti hauzombofaniri kutakura pamashamba akaomeswa nguva inotevera yaunoenda kuchitoro.
Iyi ndiro yekuomesa iraki inogona kuiswa pamusoro pekunyura kwako, kuitira kuti mvura yose iende zvakananga pasi pekurara, asi zvakare iri nzira yakakwana yekugeza michero nemiriwo kana iwe usina colander inobatsira. Uye kana iwe wapedza kuishandisa, iyo inobvumidza kumusoro kuti isungirwe, kuti iwe ugogona kuiisa pasi pekunyura.
Kana mhete dzesilver kana mutsipa dzichitaridza kushoma pane kupfeka, unogona kumutsidzira nesimba nerubatsiro rweiyi jewelry. Yakagadzirwa nebhasiketi yakavakirwa-mukati, kuti iwe unogona kusiyira zvidimbu zvako zvakashongedzerwa mune mhinduro mukati mehusiku, asi - kune mamwe matombo akasimba uye esimbi - iwe uchangoda kungo dunk uye zvinyoro nyoro neku buritsa.
Ruzhinji rwevanhu vanofarira paAmazon, ino acupressure mat ndeye "mubhedha wezvipikiri" iwe uchazoda kurara pasi. Yakagadzirirwa nezviuru zve acu-point, uye kana iwe uchivata pamusoro pawo, ivo vanoshanda kusimudzira kutenderera, kuderedza kushushikana, kutsigira yakanaka yekumuka-kutenderera kutenderera, uye kudzoreredza kurwadziwa. Mumwe muongorori akanyora, "Ini ndawana izvi nekuti ndakanga ndine maronda uye akasimba mutsipa uye shure kumashure uye handigoni kubhadhara nguva dzose. [...]. Mushure memaminitsi mashoma, yakatanga kupisa, asi nenzira yakanaka. Ndakawana ndovhara maziso angu ndokuzorora. Pandakasimuka, ndainyatsonzwa mutsauko! ”
Vabereki vePfu vachada ichi chakakomberedzwa compact ruoko vheji inoratidzira yakasarudzika ruzha rwakabvisa iyo inobvisa katsi uye imbwa bvudzi kubva upholstery zviri nyore. Izvo zvakare zvakanakira kushandiswa pane kapeti, nzvimbo dzakaomesesa, uye masitepisi, uye iyo-tsoka-gumi-tsoka ketambo inokupa iwe hurefu hwakareba kurova.
Ehe, pane nzira yemasikirwo yekubuda kunze kwezvipfeko uye iyi tsvina remover stick inozviratidza. Yakagadzirwa nezvinhu zvakapfava senge saponified coconut mafuta uye mandimu mafuta, akaoma zvakakwana kubvisa chero chinhu kubva pawaini tsvuku kune inki kune huswa madhiri. Uye vaongorori vanopika nemhedzisiro - imwe yakanyora, "Yachengetedzwa zvipfeko zvakawanda zvakaendeswa kumarara."
Dzora wako kofi mugadziri, fan, kana imba yekutandarira mwenje kubva chero kupi zvako pasi pamwe neizvi smart plugs zvinowirirana kune app yemahara pafoni yako. Kunyangwe zvirinani, unogona kuvashandisa kuisa marongero emidziyo iyo, saka haufanirwe kurangarira kudzima magetsi kana wabuda mumba. Uye zviri nani (zvekare zvekare), unogona kushandisa Alexa kana Google Home kudzora izwi rimwe nerimwe.
Zviitire iwe favour uye utenge aya akawedzeredzwa uye akareba mheni tambo dzakagadzirwa kubva inorema-basa yakarukwa nylon. Uyezve, pakureba kwemamita gumi, haufanire kunge uri pamusoro pemadziro nguva inotevera yaunoda kutora runhare apo foni yako iri kubhadharisa. Pakiti imwe neimwe inouya nehutatu.
Kana zvasvika pakuchengetedza tembiricha yekunwa, iyi isina tsvina mvura bhodhoro kunze kunonakisa kwavo. Katatu-akagadzika uye pasipo-akaiswa, inochengeta zvinwiwa zvinotonhora zvakadzoreredzwa kusvika kumaawa makumi mana nemanomwe uye zvinwiwa zvinopisa zvinopisa kusvika kusvika kugumi. Inowanikwa muhukuru nhatu uye mavara gumi nemaviri, sengexiki, bhuruu suede, uye teakwood inoratidzwa pano.
Pane imwe nzira iri nani yekunwa cocktails, uye ine chekuita neaya echando maumbwa anogadzira akawedzera mahombe makerubhi uye mipendero. Ivo vanonyungudika zvakanyanyisa kukurumidza pamawero akaenzana emahara, zvinoreva kuti zvinwiwa zvako zvinoramba zvichitapira asi zvisingawirirwe pasi. Uye ivo vanogadzirwa kubva kuchinjika silicone, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuburitsa cubes kunze imwe panguva.
Chengetedza musana wako uchifara - kunyangwe kana iwe uchipedza maawa akawanda padhesiki rako - neiyi mbichana mbichana. Yakagadzirwa kubva kunyoro nyoro uye inotsigira ndangariro mafosi, inotsigira chakakodzera musana kurongedza kudzivirira aches uye tsandanyama kusimbisa, uye maviri elastic tambo loop kutenderedza chair yako kuti ichengetedze zvakachengeteka munzvimbo. “Ndakaponesa musana wangu,” akanyora kudaro mumwe muongorori.
Nguva yekutumira: Jul-22-2020